Muuri News Network » Maamulka Shariif Xasan oo Gaadiid dagaal ka helay DF Somalia.
Maamulka Shariif Xasan oo Gaadiid dagaal ka helay DF Somalia.
Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Jeneraal Muqtaar Xuseen Afrax ayaa gaadiid nuuca ay isticmaalaan booliska ku wareejiyay maamulka Koonfurgalbeed ee Soomaaliya, gaadiidkaasi oo qeyb ka ahaa kuwa dhawaan dowladda Japan ay ku wareejisay taliska booliska Soomaaliyeed, si loogu adeego shacabka.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha Hoose maamulka Koonfurgalbeed ee dalka Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan ayaa uga mahadceliyay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska deeqda gaadiidka ah ee uu maamulka ku wareejiyay.
Jeneraal Muqtaar Xuseen Afrax ayaa sheegay in taliska booliska uu markasta ka shaqeynayo sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga guud ee dalka, isla markaana ciidanka booliska ee maamul iyo kuwa heer Qaran ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga.
Dhanka kale taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Muqtaar Xuseen Afrax ayaa kormeer ku tegay degmada afgooye ee Gobalka shabeelaha Hoose gaar ahaan xarunta saldhiga booliska, halkasi oo uu kula kulmay saraakiisha ciidanka oo uu ka xogwareystay xaaladda ay ku suganyihiin.
Taliye ku-xigeenka ayaa sidoo kale tegay dugsiga sare ee degmada Afgooye, halkaasi oo ay ka socotay bixinta mushaaraadka ciidanka booliska, waxaana taliye ku-xigeenku bogaadiyay howlaha ay ciidanka booliska u hayaan shacabka ku dhaqan degmada Afgooye, isagoo kula dar daarmay inay xoojiyaan wada shaqeynta kala dhexeysa shacabka, isla markaana ay muujiyaan dulqaad.